Toko 105 — Fideran-Tena | EGW Writings
Tsikaritro rehefa mamangy fianakaviana na sekoly aho fa mazàna mahita sary mihantonkantona eny amin’ny rindrina etsy sy eroa, eny amin’ny fitoeram-boky na eny ambony latabatra. Na aiza na aiza topazan’ny maso dia ahitana sary avokoa. Tian’ny Tompo hovàna ireny fomba fanao ireny. Raha toa ka mbola tetỳ ambonin’ny tany i Jesôsy dia ho niteny toy izao: «Ento mivoaka ireto zavatra ireto” -Jao. 2:16. Naseho ahy fa sampy mandany ny fotoantsika sy ny fisainantsika ireny, izay tokony hatokana ho an’i Jehôvah.HAT 276.2
Mandany vola ireny sary ireny. Tokony mbola hataontsika ve na dia mahafantatra aza isika fa misy asa goavana miandry ary mila hatao ankehitrio, kanefa lanintsika ny volan’i Jehôvah hanasana sy hakana ireo sarintsika sy ny sarim-pianakaviantsika? Moa ve ny ariary lanintsika amin’ireny tsy tokony hanampiantsika ny vola ampiasaina amin’ny asan’Andriamanitra? Mandany ny harena ireny sarisary ireny kanefa tokony hatokana ho an’ny sahan’ny Tompo; ary koa mampanadino ny saina amin’ny fahafantarana ny fahamarinan’Andriamanitra.HAT 276.3